About us - Zhejiang Tonva amapulasitiki umshini CO., LTD
Umshini weplastiki weZhejiang Tonva CO., LTD
I-TONVA (AZ turnkey supplier, 1993), eholwa yi-ISO9001: 2008 International Quality Control System ne-CE & SGS certificattion, ibilokhu isendleleni yokwenza imikhiqizo emisha ephezulu nobuchwepheshe obusha. Imisebenzi yethu yebhizinisi ihlanganisa ukwenziwa kweBlow Molding Machine, Pet Blow Molding Machine and Molds. Siyakwazi ukuthekelisa cishe amasethi womshini angama-400 unyaka ngamunye emazweni angaphezu kwekhulu, njengeBangladesh, i-India, iPakistan, iNingizimu Afrika, i-Argentina, iMalaysia, i-UAE, i-USA njalonjalo.
Umshini wethu wokubumba umshini we-extrusion usetshenziswa kabanzi emikhiqizweni esetshenziswa nsuku zonke, ibhodlela lamanzi ezemidlalo, ibhodlela lezibulala-zinambuzane, ibhodlela lemithi, ibhodlela lezimonyo, isitsha sokupakisha ukudla, izingxenye zefenisha, izingxenye zezimoto, ithoyizi, ijeri kanye nezinye ipulasitiki elingenalutho imikhiqizo.
Ukusekelwa okuhlala njalo kokusekelwa kuyithuluzi lethu lensiza elihamba phambili. Kuzo zonke izigaba zephrojekthi yakho, silapha ukunikeza izeluleko zobuchwepheshe. Ukwaneliseka kwakho kusipiliyoni sokuthenga kuyinto enhle kithi. Sizibophezele nasekugcwaliseni ukusebenza kahle kokukhiqiza kwakho ngokusemandleni ngenhloso yokubambisana kwe-win-win.
Iminyaka engaphezu kwengu-30 yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza kochwepheshe, ikunikeza ngemishini esezingeni eliphakeme nemishini.
Enza ngendlela oyifisayo imishini engajwayelekile ngokuya ngezidingo zamakhasimende bese wenza imishini yokuncintisana kuwe.
Bona Imboni 4.0 futhi ukhuthaze "Ukusebenzisana kwabantu nekhompyutha"
Ngemuva-yokuthengisa service team njalo online ukukunikeza service quality.
Nikeza ukwesekwa kwangemva kokudayiswa komkhiqizo wakho futhi uthuthuke nawe.
Ukugxila kwikhwalithi yomshini ngaphezu kweminyaka engama-30, kukulethela impilo eseleyo yomshini. Qhubeka ngokuqamba nokuthuthukisa, unikeze ngemishini yemishini engcono kakhulu, esebenza kahle futhi esheshayo emakethe.
Ubuchwepheshe obuyinhloko bomshini we-Die die nokuhamba ngokuvalwa komklamo ozimele kuyinzuzo yethu eyingqayizivele embonini yokubumba igalelo.
Ukuqamba kungamandla amakhulu okukhiqiza nomthombo wobungqabavu benkampani.
Njengenkampani yezinkanyezi ekhethekile ekwenzeni imishini yokubumba igalelo,> i-7 \_ OW \_ ibeka njalo ucwaningo lobuchwepheshe nentuthuko endaweni yokuqala. Le nkampani inekamelo lokucwaninga nentuthuko elizimele, futhi ifakwe ithimba lochwepheshe le-R & D, kufaka phakathi onjiniyela abaphambili be-blow molding, onjiniyela abaphambili be-blow mold design, ochwepheshe be-blow molding, njll Ukuphendula izidingo ezahlukahlukene zemakethe, thina zama njalo isisombululo esisha, uqhafaza imakethe yomshini wokubumba onomphetho ophakeme, osebenza kahle futhi ophakeme ngemishini yejubane.
Ukuqamba kuholela i-YAOVA ukuthi iqhubekele phambili kuyo yonke indlela.
Izinkampani zilandela "ikhwalithi yokusinda, emisha kanye nentuthuko, ifilosofi yebhizinisi egxile ezimakethe, egxile kwezinsizakalo, insizakalo yokuqala yomsebenzisi ebanzi, ehlukahlukene, ezinhlobonhlobo, izimisele ukusebenzisana nozakwethu abavela kuzo zonke izizinda zempilo ukudala